I-Semalt Expert - Isikhokelo sokuqala kwi-Web Scraping In Python
I-Web scraping ibhekiselwa kwindlela yokusetyenziswa kwesoftware esetyenziselwa ukukhipha ulwazi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Ugxininiso oluphambili lwenkqubo kukuguqula idatha engaqinisekanga (ifomathi ye-HTML) kwi-data ehleliweyo (spreadsheet okanye database). Kukho iindlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwewebhu, kodwa indlela eqhelekileyo kunye elula isebenzisa iPython. Oku kungenxa yokuba iPython inotye kwizinto eziphilayo njengoko inayo "ithala leencwadi ezintle" elinceda ekuthatheni ulwazi - planning personnel sous excel.
Ngaphezulu kweminyaka, kuye kwanda ukunyuka okukhulu kwimfuno yokuqhaqha kwiwebhu njengoko kuboniswe ukuba iphumelele ngakumbi. Kukho ezinye iindlela ezinokuthi umntu akwazi ukukhipha ulwazi lwewebhu njengendlela yokusebenzisa ii-API kwiiwebhsayithi ezifana ne-Twitter, i-Google kunye ne-Facebook kodwa oku akuyona indlela eqinisekileyo njengokuba kukho iiwebhsayithi ezingaboneleli nge-IPS.
Iibrariyari ezifunekayo kwi-web scrapping
I-Python yenye yezona zinto zikhethwa kakhulu kwi-web scrapper njengoko ivumela umntu ukuba akwazi ukufumana amathala eencwadi unokwenza umsebenzi omnye kwaye uyenembile kwaye kulula ukulawula. Iimbini ezibini ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwiimodyuli zePython ekuchithweni kwedatha ziquka i-Urllib2 kunye ne-BeautifulSoup. I-Urllib2 imodyuli yePython engasetyenziselwa ukulandela ii-URL. Ngakolunye uhlangothi, i-BeautifulSoup iyithuluzi esetyenzisiweyo ukudonsa ulwazi olufana neetafile kunye negrafu ezivela kumaphepha ewebhu.
Ukutshintsha iphepha lewebhu usebenzisa i-BeautifulSoup
I-BeautifulSoup yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu zixhobo zewebhu..Ukuze ukwazi ukucoca iphepha lewebhu usebenzisa i-BeautifulSoup, kukho amanyathelo athile kufuneka alandele. Ziquka:
1. Thengisa iilayibrari ezifunekayo - kulo mnye kufuneka ukuba angenise iilayibrari ezifunekayo ukuze afumane ulwazi oluyimfuneko
2. Sebenzisa umsebenzi " "ukujonga isakhiwo esinyanisiweyo sekhasi le-HTML - le nyathelo elibalulekileyo njengoko linceda umntu ukuba azi iithegi ezitholakalayo
3. Sebenza nge tag HTML- ezinye zeetaki ziquka ithegi yesobho
4. Fumana ithebula elifanelekileyo lokufumana itafile elungileyo kubalulekile njengoko umntu uya kukwazi ukufumana idatha echanekileyo.
5. Ukukhupha ulwazi kwiSet Frame Data-oku kuyinyathelo lokugqibela kwaye kulo, unako ukufumana iziphumo abazifunayo.
Ngendlela efanayo, i-BeautifulSoup ingasetyenziselwa ukwenza ezinye iintlobo ezahlukeneyo ze-web ukukhahlela ngokuxhomekeka kwizinto ezikhethwa ngumntu.
Kukho abo bacinga ukuba bangasebenzisa ibonakaliso ngokuqhelekileyo endaweni yokukhangela iwebhu njenge-BeautifulSoup kwaye bafumana iziphumo ezifanayo. Oku akunakwenzeka kuba kukho iintlobo ezahlukeneyo phakathi kwe-BeautifulSoup kunye neentsuku eziqhelekileyo kunye neziphumo zazo zokugqibela zihluke kakhulu. Ngokomzekelo, iikhowudi ze-BeautifulSoup ziba namandla ngakumbi kunezo zibhaliweyo ngamazwi avamile.
Ngako oko, ukusebenzisa i-web indlela yokwenza i-intanethi yindlela efanelekileyo kakhulu njengokuba umntu unokukwazi ukufumana iziphumo ezichanekileyo